इमिग्रेशन विशेष - Page 279 of 287 - KHASOKHAS
-विजय थापा अमेरिकाको डिसी महानगर क्षेत्रको भर्जिनियामा बसोबास गर्ने लेखक ड्यारेन डडसनले आफुले प्रकाशित गरेको पुस्तकमा नेपाली किशोरी लता गौडेलले बनाएको चित्रलाई आवरण बनाएका छन् । भर्जिनियाको स्यानटिलि शहरमा बसोबास गर्दै आएकी १७ बर्षिय ११ कक्षा उत्रिण गौडेलले आफुले बनाएको चित्र अमेरिकन पुस्तकमा छापिएकोमा हर्ष व्यक्त गरिन । लेखक डडसनको साइकामोर ,ए फेरीटेल टरटल नामक …
अहा अर्गानिक !
अमेरिकाको मेरिल्याण्डको डेन्टोनमा अवस्थीत अर्गानिक फार्म । फार्मका संचालक लोक तिवारीले अधिकांश बिउ नेपालबाटै ल्याएर अमेरिकामा अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरिरहेको जानकारी दिएका छन् । बिउ नेपाल बाहेक भारत र बंगालादेशबाट पनि भित्राइने गरेको छ । फोटो : खसोखास
संविधान कार्यान्वयन र राजनीतिक अस्थीरता
– डा. बाबुराम भट्टराई मुलुकमा नयाँ संविधान बनेको झण्डै एक वर्ष पुग्दैछ । यही अवधिभित्र संविधानका केही प्रावधानहरु संशोधन पनि भइसकेका छन् । तैपनि मुलुकको नयाँ संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेका विविध जातीय तथा मधेशी समुदायको सरोकारलाई संबोधन गर्न सकिएको छैन । यसले गर्दा नयाँ संविधानको कार्यान्वयनको सवालमा निरन्तर अवरोध कायम छ । यसको यथाशीघ्र सम्बोधनविना संविधानको …
-अस्मिता खड्का / काठमाडौं मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार गम्भिर अपराध हो । यो अपराधले समाजका हरेक तप्का कुनै न कुनै हिसाबले प्रतावित बन्न पुगेका छन् । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार विश्वमै अबैध हातहतियार र लागू पदार्थ ओसारपसार पछिको तेस्रो ठूलो संगठित अपराध भनिएको छ । नेपालको हकमा यो कार्य वैदेशिक रोजगारीबाट सुरु भई मानव …
तामाङ सोसाईटी अफ अमेरिकाको अध्यक्ष उम्मेदवारमा शान्त थोकर
प्रशान एलुङ राई तामाङ सोसाईटी अफ अमेरिकाको अध्यक्ष पदमा शान्तबाबु थोकरले उम्मेदवारी दिने घोषणा गरेकाछन् । थोकरले न्युयोर्कमा आयोजित पत्रकार भेटघाट कार्यक्रम मार्फत उक्त जानकारी गराएका हुन् । सोसाईटीको आठौं अधिवेसन आगामी अगस्ट महिनाको २८ तारिख न्युयोर्कमा सम्पन्न हुँदैछ । दुई बर्षे कार्यकालको लागि अमेरिकामा रहेका समग्र तामाङ समुदायको बृहत्तर हकहितको लागि काम गर्ने उद्देश्यसँगै …
अष्ट्रेलिया निवासी सञ्चारकर्मी चिरञ्जीवी देवकोटा नेपाली पर्यटनदूत
अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया निवासी सञ्चारकर्मी चिरञ्जीवी देवकोटालाई नेपाल पर्यटन बोर्डले मानार्थ पर्यटनदूत नियुक्त गरेको छ । पर्यटन बोर्डले अष्ट्रेलियाको भिक्टोरिया राज्यका लागि अवैतनिक पर्यटनदूतको रुपमा देवकोटालाई आगामी दुई वर्षका लागि नियुक्त गरेको हो । पर्यटनका गतिविधिलाई अझ बढाउन नेपाल सरकार पर्यटन बोर्डले विभिन्न शहरहरुका लागि पर्यटनदूत नियुक्त गर्नेक्रममा भिक्टोरिया राज्यका लागि देवकोटालाई नियुक्त गरेको हो । …
बलिउड स्टार शाहरुख खानलाई अमेरिका आउने क्रममा यसपटक पनि बिमानस्थलमा अध्यागमनका अधिकारीहरुले केहीबेर नियन्त्रणमा लिएका छन् । उनलाई अमेरिका आउने क्रममा शुक्रबार लस एन्जलस इन्टरनेशनल एयरपोर्टमा नियन्त्रणमा लिइएको हो । भारतका लागि अमेरिकी राजदूतले यसप्रति माफी माग्दै आगामी दिनमा यस्तो नहोस् भनेर सम्बन्धित निकायसँग काम गरिरहेको जानकारीदिएका छन् । शाहरुख खानलाई हरेक पल्ट अमेरिका आउँदा …
दाईजो नल्याएको भन्दै निर्घात कुटपीट
दाईजो नल्याएको भन्दै नेपालगन्ज १९ बालेगाउँकी १८ वर्षीया आसरुन जोलहालाई परिवारले निर्घात कुटपीट गरेका छन् । कुटपिटबाट उनका दुबै आँखामा गहिरो चोट लागेको छ । गम्भीर घाईते भएकी आसरुनको नेपालगन्ज मेडिकल कलेज नेपालगन्जमा उपचार भैरहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेले जनाएको छ । आसरुनलाई कुटपिट गर्ने उनका श्रीमान २४ वषर्ीय वसिम जोलहा र सासु बाबादैया जोलहालाई …
-विजय थापा (तस्विरसँग लेखकको सम्बन्ध छैन ) जीवन कालमा मानिस धेरै पटक रुनु पर्ने बाध्यता हुन्छ। कंकला शब्द निकाली पनि रुने गर्ने गरिन्छ। डाको छोडेर रुन्छन। सबैको रुने आफ्नै शैली हुन्छ। नरुने सायद बिरलै हुन्छन । बालक देखि बृद्ध सम्म जीवनमा धेरै पटक रुने वातावरण पनि आई लाग्दछ। मानिस सुखमा डाको छोडेर रुदैनन। खुशीले उफ्रिन्छन। दुख पाउदा मानिसले जीवन देखि दिक्दार …
मेक्सिकोको बाटो हुँदै गैरकानुनी रुपमा अमेरिका छिर्ने नेपालीहरुको विषयमा तयार पारिएको तीजको गीत बजारमा आएको छ । ‘ओबामाको देश’ बोलको तीजको गीतमा मेक्सिकोहुँदै लाखौं रकम तिरेर गैरकानुनी रुपमा अमेरिका जान भन्दा आफ्नै देशमा केही गरेर बस्न प्रोत्साहन गरिएको छ । गीत हमाल म्युजिकले बजारमा ल्याएको हो । ‘कोही मेक्सिको कोही पुगे पानामा, कोही अमेरिकन पुलिसको …
अमेरिकामा अध्ययनका लागि आउनेहरुका लागि अमेरिकी सरकारले बढायो शुल्क
अमेरिकी सरकारले अमेरिकामा अध्ययनका लागि आउने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुका लागि..
अब अमेरिकाको ग्रिनकार्ड अमेरिकी दूताबासबाट परित्याग गर्न नपाइने
अब अमेरिकाको ग्रिनकार्ड विदेशमा रहेका अमेरिकी दूतावास, कन्सुलेट वा युएससीआईएसका..
दुर्गा देवकोटा / बालविवाह न्यूनीकरणका लागि टीकापुर नगरपालिकाले ‘हाम्री छोरी, प्यारी छोरी’..
हुकुमी शैलीमा प्रधानमन्त्रीको शासन : सांसद भुषाल
सांसद पुष्पा भुषालले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विधिको शासनको ठाडो उल्लङ्घन गरी हुकुमी..
(एएफपी) – इन्डोनेसियाको पूर्वी भेगमा सोमबार ७.३ म्याग्नीच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको..
रुपन्देहीमा दुई युवतीमाथि सामूहिक बलात्कार भएको छ । गैडहवा गाउँपालिकाका– २२ वर्षका दुई..